ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်နှင့် 7Day ဂျာနယ်အင်တာဗျူး – DPNS
Home>အမြင်သဘောထား>အင်တာဗျူး>ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်နှင့် 7Day ဂျာနယ်အင်တာဗျူး
July 19, 2013 December 6, 2021 DPNS INFORMATION38
၁၉၈၈၊ ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးတွင် ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍဍမှ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည့် ကျောင်းသားများပါဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော လူဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလ၌ နဝတအစိုးရက ပါတီကို ဖျက်သိမ်းပစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရသော်လည်း လူဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ပျောက်ကွယ်မသွားခဲ့ဘဲ တောတွင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ၊ အကျဉ်းထောင်တို့၌သာမက တိုင်းပြည်နှင့်အနှံတွင် ဆက်လက် ရှင်သန်နေဆဲပင် ရှိသည်။
ယခုအခါ မြန် မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ် ပေါ်တိုးတက်လာမှု အနေအထားများပေါ်မူတည်လျက် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်လျက် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ရန် ပြင်ဆင်လာခဲ့သည်။ ထိုသို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ခြင်းအပေါ် လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဌ ဦးအောင်မိုးဇော် နှင့် 7Day က တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် အပြည်အစုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး ။ ။ ပြည်တွင်းမှ တရားဝင်ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပြီးပြီလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကြိုးစားပမ်းစား ပြင်ဆင်နေတုန်းပါပဲ။
(က) ပါတီရဲဘော်တွေ (အတွင်း၊ အပြင်)နဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်။
(ခ) တစ်တိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ ဒေသအလိုက် စည်းရုံးရေးကော်မတီတွေ စုဖွဲ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
(ဂ) ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ ပါတီရဲ့ရပ်တည်မှု၊ အထွေထွေနိုင်ငံရေးသ‌ဘောထား၊ လုပ်ငန်းစဥ်စတဲ့ ပါတီရဲ့ Program တွေကို ဆွေး‌နွေးညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံစေဖို့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
(ဃ) နောက်အရေးကြီးတဲ့ လက်တွေ့ပြဿနာလည်းဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးချင်းစီ ရဲဘော်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ရပ်တည်ရေးနဲ့ ပါတီတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအပါအဝင် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေအတွက် နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
မေး ။ ။ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကိုရော ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ဖို့ အစီအစဥ် ရှိသလား။
ဖြေ ။ ။ လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေအရဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ အနည်းဆုံး အမတ်နေရာ ဘယ်နှနေရာ ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဥ် တစ်ခုလုံးမှာ လွတ်လပ်တဲ့၊ မျှတတဲ့ အခြေအနေရှိဖို့ Level Playing Field ရှိဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရုန်းကန်ရဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကျော် တောထဲမှာ၊ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ၊ တိုင်းပြည်အပြင်မှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအဖြစ် မှတ်ပုံတင်လို့မရအောင် ကန့်သတ်ထားတဲ့ တည်ဆဲဥပဒေတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေကို ကျော်လွှားဖို့ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတဲ့ အကန့်အသတ်တွေကို ပြုပြင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရဦးမယ်။ ရုန်းကန်ရဦးမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ကျော်လွှားနိုင်မှ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ရေး၊ မပါဝင်နိုင်ရေးဆိုတာကို စဥ်းစားရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက တဆင့် အပြောင်းအလဲတွေကို ဖော်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အားလုံးအတွက်၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် အဲဒီအခြေအနေပေး၊ မပေးက အရေးကြီးတယ်။
မေး ။ ။ ပြည်တွင်းမှာ တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်တော့မယ့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအပေါ် သဘောထားပြောပါဦး။
ဖြေ ။ ။ ရှေ့မေးခွန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သဘောထားတွေကို ဖြေခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ နည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို အနှစ်သာရအရ ဒီမိုကရေစီ၊ လူသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အာမခံတဲ့ဥပဒေ၊ တိုင်းပြည်တွင်းမှာ အတူတကွ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအတွက် နောက်လူနည်းစုတွေရဲ့ တန်းတူရေးကို အာမခံတဲ့ ဥပဒေအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုပါတယ်။
မေး ။ ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဒုတိယလိုက်ခဲ့တဲ့ ပါတီအနေနဲ့ ပြန်လည်ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် အရင်လို နိုင်ငံရေး ဩဇာရရှိအောင် ဘယ်လိုပြန်လည်ထူထောင်မယ်လို့ စိတ်ကူးသလဲ။
ဖြေ ။ ။ (က) ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဒုတိယလိုက်ခဲ့တဲ့ ပါတီဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပါတီတည်ထောင်ပြီးစ ၁၉၈၈ နှောင်းပိုင်းနဲ့ ၁၉၈၉ ခုနှစ် အစပိုင်းတွေမှာ အင်အားအရ၊ ပါတီရဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်မှု၊ ပြည်သူလူထုအများစုရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု အရှိတ်အဟုန်နဲ့ ရရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ငံကြီးအချို့ရဲ့ သံရုံးအစီရင်ခံစာတွေမှာ ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးပါတီအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ ပါတီကို ရဲဘော်မိုးသီးဇွန် ဦးဆောင်စဥ် ကာလတုန်းကပါ။ အဲဒီလို နိုင်ငံရေးအရ အရှိန်အဟုန်ကြီးမားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေက . . .
၁။ ပါတီဟာ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းမှာ သန္ဓေတည်ခဲ့ပြီး အရေးတာ်ပုံတပ်သားတွေက နေရာအနှံ့မှာ ဦးဆောင်စုစည်းခဲ့လို့ . . .
၂။ အဲဒီကာလက စစ်အစိုးရအပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုမြင်ရပ်တည်ခဲ့လို့ အစိုးရကလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိနှိပ်ခဲ့လို့ . . .
၃။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ဆိုတာထက် ကျောင်းသား၊ လူငယ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု (Democracy Movement) အဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ခဲ့လို့ . . .
၄။ လူထုရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို နေရာအနှံ့မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖော်ထုတ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့ . . .
၅။ အရေးကြီးဆုံး အချက်အလက်ကတော့ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ အရှိန် (Momentum) က အဲဒီကာလတွေမှာ အားကောင်းဆဲပဲဖြစ်ခဲ့လို့ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ယူဆတယ်။ အခြားအချက်အလက်တွေ ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
(ခ) ဒီနေ့ ကာလ ပါတီတည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေကတော့ ပိုပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့နိုင်တယ်။ အရင်ကလို Momentum မျိုး ရနိုင်ဖို့ နောက်ခံအခြေအနေကလည်း အတော်ကွာခြားသွားပြီ။ သို့သော်လည်း ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲခက်ခဲ ရင်ဆိုင်ရမှာ၊ ကျော်လွှားရမှာ၊ တည်ဆောက်ရမှာက ယနေ့ပါတီကို တာဝန်ယူထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ပါတီကို သိပ်သည်းကျစ်လျစ်ပြီး အရည်အချင်းကောင်းတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်၊ ပြည်သူကို တကယ်ပဲ အလုပ်အကျွေးပြုတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် တည်ဆောက်လိုတယ်။ သိပ်သည်းကျစ်လစ်တဲ့ ပါတီလို့ ပြောပေမယ့် ပါတီကို နိုင်ငံရေးအရ ရင့်ကျက်မှုရှိတဲ့ ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ် (Intellectual) အချို့ကပဲ စုစည်းတဲ့ ပါတီမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ တန်းတူရေး၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရေးအတွက် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အလွှာအသီးသီး၊ ထောင့်အသီးသီးက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ စုစည်းတဲ့ပါတီ၊ အဲဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ပါတီအဖြစ် တည်ဆောက်လိုတယ်။ အဲဒါကို ဦးတည်ပြီး တည်ဆောက်သွားမယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် ပြည်သူကို တကယ်ပဲ လက်တွေ့မှာ အလုပ်အကျွေးပြုတဲ့ ပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်လိမ့်မယ်။
မေး ။ ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းအပြင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ယုံကြည်အားကိုးမှုနဲ့ ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုအပေါ် မူတည်ပြီး လူထုအကြိုက် ကွဲပြားနေတဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေအပေါ် ဦးအောင်မိုးဇော် ဘယ်လိုယုံကြည်မှုနဲ့ ပြန်ချေမလဲ။
ဖြေ ။ ။ (က) ကျွန်တော့်အနေနဲ့ရော ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ရောပေါ့နော်၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ဒီမိုကရေစီ ရေးလှုပ်ရှားမှုထဲကနေပြီး တစ်ခါမှ အချိန်အချို့လောက်တောင်မှ အပြင်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပဲ အရွယ်ရောက်စကနေ ယနေ့အထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက် “ပြန်လည်ခြေချ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ပြဿနာရှိပါတယ်။
(ခ) ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ခိုင်မာတဲ့ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးကို မိမိရရ မဆုပ်ကိုင်နိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ ခိုင်မာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက်လည်း တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကို မရောက်သေးဘူး။ ဒီအတွက် အလုပ်လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ လက်တွဲပြီး ခုနက ကိစ္စတွေကို ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် လုပ်ကိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
(ဂ) အချို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သက်တူရွယ်တူမျိုးဆက်တူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို ကြားနေရတယ်။ ၂၀၁၅ အလွန် နိုင်ငံရေး၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ စသည်ဖြင့် အဲဒီအတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ် မူတည်ပြီး သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါတီအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီပြောသံဆိုသံတွေကို နားမလည်သလို စိတ်လည်းမဝင်စားဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ဝင်စားမှုက ကျွန်တော်တို့ပါတီကို Party Platform အပေါ်မှာ အခြေခံစုစည်းတဲ့ ပါတီဖြစ်အောင် သိပ်သည်းကျစ်လျစ်အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ပါတီဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာပဲ။ နောက်အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရော ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ပါတီတွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီး အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီစနစ် (Party System) ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ပေါ်ထွန်းလာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ အခု Nation Building တို့ ၊ State Building တို့ ပြောဆိုနေကြတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အပိုင်းမှာ ကိုယ်တတ်စွမ်းသရွေ့ အုပ်တစ်ချပ်ဖြစ်ဖြစ် သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားချင်ပါတယ်။
(ဃ) နိုင်ငံရေးမှာ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပိုပြီး လိုအပ်နေသေးတယ်။ အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘောထားတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာအပေါ် သက်ရောက်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဆိုးတွေထဲက အကောင်းလို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ကိုမင်းကိုနိုင်လို ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကို ရရှိထားတာပါပဲ။ အချို့က ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရဲ့ အရှိန်ဩဇာကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှု၊ ဆည်းကပ်မှုတို့ ဆိုတာတွေကို ရေတိုအမြင်နဲ့ ပုံကြီးချဲ့နိုင်တယ်။ အပြစ်တင်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ယုံကြည်တာက ဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အရှိန်အဝါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးယဥ်ကျေးမှုကို တည်ဆောက်သွားဖို့ အရမ်းအခရာကျတယ်ဆိုတာပါပဲ။ တာရှည်မယ်။ ခက်ခဲမယ်။ အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံရနိုင်တယ်။ ဒါတွေကို ညှိပြီး ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။
မေး ။ ။ လက်ရှိအစိုးရသက်တမ်းကုန်ဖို့ (၃၁)လပဲ လိုတော့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာ အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေထဲက ဘယ်လိုအရာတွေကို ကျေနပ်အားရပါသလဲ။ ဘာတွေက မကျေနပ်စရာဖြစ်နေပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ (က) လယ်သိမ်း၊ ယာသိမ်းကိစ္စတွေကို သေသေချာချာ မူဝါဒချမှတ်ပြီး မဖြေရှင်းနိုင်တာ။
(ခ) ဒီနေ့အထိ အလုပ်သမာ‌းတွေရဲ့ အနိမ့်ဆုံးလစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်သေးတာ။
(ဂ) တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အခြေခံကျတဲ့ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ကြိုးစားမှု မတွေ့ရသေးတာ။ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ ဦးစားပေးပြီး ထိထိရောက်ရောက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာမတွေ့ရသေးတာ။
(ဃ) လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအခြေခံ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်မကိုင်တွယ်နိုင်တာ။ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေမှာ အချိန်ဇယားရှိစေချင်တယ်။ တိကျတဲ့ Mechanism တွေ ရှိစေချင်တယ်။ လူထုကို သေသေချာချာ ပြသင့်တယ်။ တိုင်းပြည်မှာ National Accord ရှိဖို့ အရမ်းလိုအပ်နေပြီ။
မေး ။ ။ အခုလက်ရှိအဝေးရောက်ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပွင့်လင်းလာချိန်မှာ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဖြစ်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ပါတီကို မြေအောက်ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ ရှုမြင်ရင်ပိုပြီး မှန်ကန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်က ဌာနချုပ်အဖြစ် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ရပ်တည်ထားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ရှိနေခဲ့တာပါပဲ။
အခု အဲဒီရဲဘော်အားလုံး ပြန်လည်စုစည်းပြီး မြေပေါ်မှာ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည်ရပ်တည်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြိုးစားနေတယ်။ ကနေ့ နိုင်ငံရေးကို ဖြတ်သန်းဖို့ ညီနောင်မဟာမိတ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အမြင်ညှိနှိုင်းမှုတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ပါတီအနေနဲ့တော့ က‌နေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအောက်မှာ ပါတီနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လူငယ်အင်အားစုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေး အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စ၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စ၊ အလုပ်သမားလယ်သမားကိစ္စ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ လေ့လာမှုတွေ ဆွေးနွေးမှုတွေ အဆက်မပြတ်ရှိနေပါတယ်။
မေး ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ PR (အချိုးကိုယ်စားပြုစနစ်) အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ ။ ။ ကျင့်သုံးဖို့ စောသေးတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဌနဲ့ NLD ပါတီဥက္ကဌတို့ အခုလို တပူးတွဲတွဲ ဖြစ်လာတဲ့အပေါ် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေက ကြိုဆိုကြတာရှိတယ်။ လွှတ်တော်မှာ ဖြစ်လာမယ့်အပေးအယူတစ်ခုလို့လည်း ပြောကြတယ်။ ဦးအောင်မိုးဇော်ရဲ့ အမြင်ကိုပြောပါဦး။
ဖြေ ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်က နည်းနည်းလေးမှ သွေဖယ်မယ့်ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ယုံတယ်။
မေး ။ ။ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောနေတဲ့ အချိုးကိုယ်စားပြုစနစ် (PR) ကနေ ညွန့်ပေါင်းဆိုတာကို လှည့်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဦးအောင်မိုးဇော်တို့ပါတီအနေနဲ့ဆိုရင် ညွန့်ပေါင်းကိစ္စကို ဘာပြောမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေက ဒီမိုကရေစီကို တကယ်ဖော်ဆောင်မယ့်၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မယ့် ပါတီကိုပဲ ပုံအောပြီး ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
မေး ။ ။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပေါ် ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြောချင်တာများရှိရင် ပြောပါဦး။
ဖြေ ။ ။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကွဲပြားခြားနားမှုကို အခြေခံတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်အတွက် အလွန်ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ပါပဲ။ အစွန်းရောက်တဲ့ အမျိုးသားရေး ပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ တားဆီးဖို့၊ ထိန်းသိမ်းဖို့ ကိစ္စတွေဟာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ တာဝန်သိတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ထိန်းသိမ်းကြစေချင်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ အစိုးရမှာ တာဝန်အရှိဆုံးလို့ ထပ်ဆင့်ပြီး ကျွန်တော့်သဘောထားကို ပြောချင်ပါတယ်။
မေးမြန်းသူ – သီဟ
ဓာတ်ပုံ – ‌ဂျေမောင်မောင် (အမရပူရ)